काठमाडौंमा ह्वात्तै बढ्यो कोरोना - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंमा ह्वात्तै बढ्यो कोरोना
काठमाडौंः काठमाडौं उपत्यकामा मंगलबार ६७६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा उपत्यकाको काठमाडौंमा ५५५, भक्तपुरमा ८६ र ललितपुरमा ३५ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
योसँगै उपत्यकामा कोराना संक्रमितको संख्या १२ हजार ९ सय २४ पुगेको छ । काठमाडौंमा १० हजार ५ सय ८३ ललितपुरमा १ हजार २ सय २६ र भक्तपुरमा १ हजार १ सय १५ संक्रमित पुगेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस पर्सामा थप १ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । यसअघि उपत्यकामा सबैभन्दा बढी ६९६ जना संक्रमित थपिएका थिए ।
नेपालमा मंगलबार हालसम्मकै बढी १४५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । थप ११ जनाको मृत्यु हुँदा १९६२ जना निको भएका छन् ।
ट्याग्स: काठमाडौं उपत्यका, कोरोना, डा. जागेश्वर गौतम, स्वास्थ्य मन्त्रालय